Duur Mise Digasho? Maurizio Sarri Oo Ku Dooday In Jose Mourinho Uu Kooxdiisa United Ku Haysto Ciyaartoyda Premier league Ugu Fiican. – Cadalool.com
Duur Mise Digasho? Maurizio Sarri Oo Ku Dooday In Jose Mourinho Uu Kooxdiisa United Ku Haysto Ciyaartoyda Premier league Ugu Fiican.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa ku dooday in Jose Mourinho uu kooxdiisa Man United ku haysto ciyaartoyda Premier league ugu fiican. Hadalka Maurizio Sarri ayaa imanaya waqti ka hor kulanka ugu horeeya ee uu Mourinho kaga hor imanayo kulankiisii ugu horeeyey ee Premier league.
Maurizio Sarri ayaa sheegay in marka si gaar ah min hal ciyaartoy loogu qiimeeyo kooxaha Premier League in Mourinho uu haysto ciyaartoyda Premier league ugu fiican halka uu Sarri tilmaamay in ka koox ahaan ay Man City tahay kooxda Premier league ugu fiican.
Maurizio Sarri oo ka hadlaya in marka min hal-hal ciyaartoy loo qiimeeyo Premier league ay Man United kuwa ugu fiican haysato ayaa yidhi: “Iyagu waa koox aad u xoogan. Laga yaabee in marka ciyaartoy-ka-ciyaartoy ahaan ay noqoto in iyagu ay yihiin kooxda Premier league ugu fiican”.
Laakiin Sarri ayaa cadeeyay in marka ka la qiimeeyo isku xidhnaanta koox ahaan ay Man City ugu fiican tahay wuxuuna yidhi: “Waqti xaadirkan waxaan filayaa in ay City tahay mida ka koox ahaan uga fiican, laakiin ciyaartoy-ka-ciyaartoy ahaan waxaa aad iyo aad uga xoogan United”.
Maurizio Sarri oo hore xili ciyaareedkan uga hor yimid Guardiola iyo Jurgen Klopp ayaa hadda isku diyaarinaya kulanka maanta ee ay kooxdiisa Chelsea soo dhawaynayso Man United oo uu Mourinho kaga hor imanayo.
Inkasta oo uu Maurizio Sarri ku dooday in Mourinho uu hasyto ciyaartoyda Premier league ugu fiican ayaa loo arkaa mid dagaal dhinaca maskaxeed ah oo uu Mourinho iyo United culays ku saarayo maadaama oo ay xalaad adag ku soo jireen.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo arkaa in Maurizio Sarri uu hadda haysto koox qaab ciyaareedka ka fiican Man United ku jirta isla markaana waxaa la dareensan yahay in Blues ay guul ka gaadhi karto Man United oo soo dhibtoonaysay xili ciyaareedkan.